MSI - Singapore Education Exhibition (Virtual) | Blog - Knowledge, Career, Family
MSI - Singapore Education Exhibition (Virtual)
Dec 14 2020 MSI ADMIN 0
New Normal Life နဲ့ ရှေ့ဆက်သွားရမယ့် ကျောင်းသား/သူများရဲ့ အနာဂတ်ပညာရေးအတွက် (13) ကြိမ်မြောက် Education Conference (Virtual)
သင်က စင်္ကာပူပညာရေးကို သိရှိပြီးသူလား? အခုမှ စလေ့လာတာလား? စင်္ကာပူနိုင်ငံရဲ့ Flexible ဖြစ်တဲ့ ပညာရေးလမ်းကြောင်းတွေကို အမှန်အကန်လေ့လာချင်တယ်ဆိုရင် စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းကြီး (၆) ကျောင်းနဲ့ ပူးပေါင်းကျင်းပသွားမယ့် MSI Overseas Education ရဲ့ (13) ကြိမ်မြောက် Singapore ပညာရေး (First Virtual Conference) တက်ရောက်ဖို့ အခုပဲ စာရင်းပေးသွင်းလိုက်ပါ ။
Date - 20.12.2020 (Sunday)
Time - 1:00 PM to 3:00 PM
Venue - Zoom Conference
Free Register Here : https://forms.gle/EuTq8EFWw4cSLHmA9
MSI Hotline No : 09-5103915
Christmas နဲ့ New Year နီးကပ်လာ ပြီဆိုတော့ ပျော်စရာ Quizz များဖြေဆိုရင်း Special Gift တွေပေးအပ်မယ့် အစီအစဉ် များ ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်
Virtual Conference တက်ရောက်သူများအတွက် အထူးခံစားခွင့်တွေကတော့ ~~~~▪
Up to 100% Merit Scholarships (သို့) Study Grants များ ။ Application Fees ကင်းလွတ်ခွင့်များ။ Covid ကာလအတွင်း ကျောင်းသားရော ၊ မိဘရော ဒွိဟဖြစ်နေတဲ့ "နိုင်ငံခြားမှာ ကျောင်းတွေပြန်သွားတက်လို့ရပြီလား?" ဆိုတဲ့ အမေး၊ အဖြေကဏ္ဍများ ။ UK၊ USA၊ Australia၊ New Zealand၊ Europe တို့လို ဝေးတဲ့နိုင်ငံတွေကို အိမ်ကစိတ်မချလို့မလွှတ်ဘူးဆိုရင် ဒီလိုနိုင်ငံကြီးတွေရဲ့ဘွဲ့ဒီဂရီတွေကို စင်္ကာပူနိုင်ငံကနေပဲ ဘယ်လိုတက္ကသိုလ်ကျောင်းကောင်းတွေကနေ ရွေးချယ်တက်ရောက်နိုင်မလဲ? (9) တန်းအောင်ထားတယ်၊ (10) တန်းဖြေထားပြီး အမှတ်စာရင်းမရသေးသူများ တက်ရောက်နိုင်တဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းကောင်းတွေ ။
HND/NCC/Abe Level (5) တို့လို UK Diploma ပြီးထားသူများအနေနဲ့ IELTS မလိုတဲ့အပြင် ဘာသာရပ်ကင်းလွတ်ခွင့်တွေအတွက်ပါ ပွဲမှာလေ့လာသိရှိနိုင်ပါတယ် ။ Design ပညာရပ်သင်ယူဖို့ စိတ်အားထက်သန်နေသူများ Career ပြောင်းစရာမလိုဘဲ Online ကနေ ဘယ်လိုနည်းစနစ်ကျကျသင်ယူနိုင်မလဲ? ဆရာဝန် ၊ အင်ဂျင်နီယာ ၊ နည်းပညာရှင် ၊ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေး ၊ ဒီဇိုင်း ၊ စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုအပြင် အခြားသော အရည်အသွေးမီပညာရပ်ပေါင်းများစွာအကြောင်းကို (၂၀) ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ့် Virtual Conference ကြီးမှာ စုံစမ်းသိရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ စိတ်ပါဝင်စားလို့ Virtual Conference ကြီးအကြောင်း အသေးစိတ် မေးမြန်းချင်တယ်ဆိုရင် ဖုန်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ် ၊ လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်ဖြစ် အောက်ပါလိပ်စာ နဲ့ ဖုန်းနံပါတ်များအတိုင်း စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ် ။
MSI Yangon (Head) Office :
Address - အမှတ် (၂၃၄) ၊ ရွှေဘုံသာလမ်း (အလယ်ဘလောက်) ၊ ဒုတိယထပ် (ညာ) ၊ ပန်းပဲတန်းမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့။
MSI Mandalay (Branch) Office :
Address - အမှတ် (၁၁၃) ၊ ၇၈ x ၇၉ ၊ ၄၀ x ၄၁ ကြား ၊ မဟာဘီးတန်းလမ်း ၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ် ၊ မန္တလေး။
MSI Academy English Language Training Center :
Address - အမှတ်12/A ၊ ပထမထပ် ၊ ဇေယျာသီရိလမ်း ၊ လှည်းတန်း ၊ ကမာရွတ်မြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
#scholarship #ပညာရေး #VirtualConference #myanmarsearchinternational #overseaseducation #University #College #Student #OnlineLearning #Language #MSIAcademy #Singapore#လူငယ်များ #ပညာသင်ဆု #အခွင့်အလမ်းများ#ကမ္ဘောဇတိုင်း
Up to 100% Merit Scholarships (သို့) Study Grants များ ။ Application Fees ကင်းလွတ်ခွင့်များ။ Covid ကာလအတွင်း ကျောင်းသားရော ၊ မိဘရော ဒွိဟဖြစ်နေတဲ့ "နိုင်ငံခြားမှာ ကျောင်းတွေပြန်သွားတက်လို့ရပြီလား?" ဆိုတဲ့ အမေး၊ အဖြေကဏ္ဍများ ။ UK၊ USA၊ Australia၊ New Zealand၊ Europe တို့လို ဝေးတဲ့နိုင်ငံတွေကို အိမ်ကစိတ်မချလို့မလွှတ်ဘူးဆိုရင် ဒီလိုနိုင်ငံကြီးတွေရဲ့ဘွဲ့ဒီဂရီတွေကို စင်္ကာပူနိုင်ငံကနေပဲ ဘယ်လိုတက္ကသိုလ်ကျောင်းကောင်းတွေကနေ ရွေးချယ်တက်ရောက်နိုင်မလဲ? (9) တန်းအောင်ထားတယ်၊ (10) တန်းဖြေထားပြီး အမှတ်စာရင်းမရသေးသူများ တက်ရောက်နိုင်တဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းကောင်းတွေ ။ HND/NCC/Abe Level (5) တို့လို UK Diploma ပြီးထားသူများအနေနဲ့ IELTS မလိုတဲ့အပြင် ဘာသာရပ်ကင်းလွတ်ခွင့်တွေအတွက်ပါ ပွဲမှာလေ့လာသိရှိနိုင်ပါတယ် ။ Design ပညာရပ်သင်ယူဖို့ စိတ်အားထက်သန်နေသူများ Career ပြောင်းစရာမလိုဘဲ Online ကနေ ဘယ်လိုနည်းစနစ်ကျကျသင်ယူနိုင်မလဲ? ဆရာဝန် ၊ အင်ဂျင်နီယာ ၊ နည်းပညာရှင် ၊ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေး ၊ ဒီဇိုင်း ၊ စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုအပြင် အခြားသော အရည်အသွေးမီပညာရပ်ပေါင်းများစွာအကြောင်းကို (၂၀) ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ့် Virtual Conference ကြီးမှာ စုံစမ်းသိရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ စိတ်ပါဝင်စားလို့ Virtual Conference ကြီးအကြောင်း အသေးစိတ် မေးမြန်းချင်တယ်ဆိုရင် ဖုန်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ် ၊ လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်ဖြစ် အောက်ပါလိပ်စာ နဲ့ ဖုန်းနံပါတ်များအတိုင်း စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ် ။